प्रेमिकाले धोका दिइरहेकी त छैन ? कसरी थाहा पाउने ? – mYKantipur.Com
प्रेमिकाले धोका दिइरहेकी त छैन ? कसरी थाहा पाउने ?
२०७५, १२ असार मंगलवार १०:४५
भलै यो प्रसंग तपाईलाई हल्काफुल्का लाग्न सक्छ । ’cause हामी वैंशालु उमेरमा गरिने प्रेमलाई लहड मात्र ठान्छौं । तर, हरेकले यस चरणवाट गुज्रन्छन् । जीवनमा प्रेमको पनि अनुभूति त लिनैपर्‍यो ।
भनिन्छ नि, माया प्रेम बिना संसार चल्दैन । प्रेम सम्बन्धमा भएका सबैले आफ्नो प्रेमकथा पनि मुनामदन वा रोमियो जुलियटको अमर होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, पनि धेरैको प्रेम सम्बन्ध विभिन्न कारणले बीचमै अनायसै टुट्ने गरेको छ ।
यदि प्रेमसम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने हामी कामना गर्छौं तपाईको प्रेमसम्बन्ध कहिल्यै नटुटोस् । तपाईको प्रेम सम्बन्ध सफल होस् भन्ने कामना गर्छौं । तर, यदि तपाईको प्रेमसम्बन्धमा खटपट आएको छ भने तपाईले यस’boutमा सोच्ने बेला आएको छ ।
यदि उनी आफ्नो सौन्दर्यको धेरै ख्याल गर्छिन् तर तपाईको गेटअप र सौन्दर्यको ’boutमा भने कत्ति पनि ख्याल गर्दिनन् भने हुन सक्छ कोहि अर्कै व्यक्तिको लागि यस्तो गरिरहेकी छिन् ।
त्यो प्रेमिका भन्दा खराब को होला जसले तपाईलाई लगातार सताइराख्छिन् । उनले तपाईको बिल्कुनै पनि ध्यान राख्दिनन र तपाईले भनेको केहि पनि मान्दिनन् भने तपाएईले यस’boutमा सोच्ने बेला आएको छ । तपाईलाई उनले ध्यान नै दिन छोडिन् भने उनले अर्के मानिस भेटेको हुन सक्छ र उनी तपाईको साथमा अब रहन चाहन्नन् ।
कहिलेकाँही यस्तो हुनु त ठिकै हो तर, बारम्बार हुन्छ भने तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । जब उनी केहि घन्टासम्म तपाईलाई जवाफ दिन्नन भने उनलाई भेटेको बेलामा यस’boutमा सोध्नुहोस् र उनको अनुहारलाई पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् । उनी तपाईलाई नसोधी कतै जाने गर्छिन् र सोधेरमा रिसाउने गर्छिन् भने उनले तपाईलाई धोका दिँदैछिन् ।
२०७५ असार १२ गते १०:१५ मा प्रकाशित
धनीका कुराः निता अम्बानीको एक दिनको खर्च कति ?